Dacwad u dhaxaysa Qoysas ka soo kala jeeda Itoobiya iyo Soomaaliya oo ka socota Burco | Somaliland.Org
February 24, 2010	Burco (Somaliland.Org)- Maxkamadda Degmada Burco ee Xarunta Gobolka Togdheer, ayaa ka gar-naqaysa Kiis u dhaxeeya laba qoys oo ka soo kala jeeda Dalka Itoobiya iyo Soomaaliya, gaar ahaan Gobolka Oromada ee Itoobiya iyo Maamul-gobolleedka Puntland ee Soomaaliya.
Sida aaanu ka soo xiganay Telefishanka HCTV oo warkan baahiyay, Maxkamadda Degmada Burco ee Xarunta Gobolka Togdheer ayuu ka socdaa Kiis u dhaxeeya laba qoys oo ka soo kala jeeda dalka Itoobiya iyo Maamul-gobolleedka Puntland ee Soomaaliya, kaas oo la xidhiidha ilmo yar oo laysku haysto.
Warku wuxuu intaa ku daray in Gabadh yar oo da’deedu shan jir tahay ay isku haystaan Qoys degan Magaalada Garowe ee Xarunta Maamul-gobolleedka Puntland iyo Gabadh dhalashadeedu tahay Qoomiyadda Oromada ee dalka Itoobiya. Qoyska ka soo jeeda Puntland ayaa ku andacoonaya in ay iyagu dhaleen gabadha yar, halka gabadha kale ee Oromada ahina ay ku doodayso inay iyadu dhashay.
Aasiya Maxamed Cali oo ah Gabadha Oromada ah ee ku doodaysa in ay dhashay Ilmaha yar, isla markaana gacanta ku haysa hadda, ayaa sheegtay inay iyadu dhashay Ilmahan. “Ilmahan anigaa dhalay, si gardarro ah ayaana laygu haystaa. Inanta yari waxay ku dhalatay Jigjiga ee Kililka Shanaad, aniguna Burco maan dhaafin ee waxay igu qabsadeen oo aan deganaa Madaarka Burco. Waanan caddaynayaa” ayay tidhi gabadhan oo iyada iyo Ilmaha yarba uu hadda gacanta ku hayo oo loo dhiibay Guddoomiyaha Gobolka Togdheer Jaamac Cabdilaahi Biin.
Dhinaca kale, Gabadha kale eek u doodaysa inay iyadu dhashay Ilmahan oo ku sugan magaalada Garowe ee Puntland oo magaceeda la yidhaahdo Xaliimo Cismaan Barre ayaa sheegtay in muddo sanad iyo badh ka hor ah ilmaha laga xaday, waqtigaas oo ilmaha yar da’deedu ahaa 3 sanno iyo badh. Waxay intaa raacisay Xaliimo in lagaga xaday gabadha yar Degmada Bandar-Bayla ee Gobolka Bari ee Puntland. Isla markaana markii ay maqashay in Ilmaha ay ku doodayso in ay dhashay uu joogo Magaalada Burco ay halkaa timi, lana kulantay Maamulka Gobolka Togdheer. Halkaas oo Ilmaha yar ee ay sheegtay inay iyadu dhashay lagu dhex daray Caruur badan oo ay ka dhex garatay. Iyada oo baaq u jeedisay Xukuumadda Somaliland iyo madax-dhaqameedka Gobolka Togdheer. “Waxaan Dawladda Somaliland ee gacanta ku haysa Ilmahayga ka codsanayaa inay si degdeg ah iigu soo gudbiso, anigoo u mahad-naqaya Shacabka, Culima’udiinka iyo Shacabka Gobolka Togdheer. Waxaan mar kale ka codsanayaa iyaga oo sumcaddooda ilaalinaya in ay ii soo gudbiyaan ilmahayga.” Ayay tidhi, waxaanay intaa raacisay oo ay tidhi, “Waxa marka hore iga soo kaxaystay ma garanayo, sababtoo ah haddii aan garanayo waan kala hadhi lahaa, laakiin imika waxa gacanta ku haya Jaamac Cabdilaahi Biin (Badhasaabka Togdheer), Aadan Maxamed Ducaale iyo Aasiya Maxamed Cali. Waxaanan ka codsanayaa Dawladda sharafta leh inay si degdeg ah iigu soo gudbiyaan Ilmahayga aniga oo dhibbane ah.”
Geesta kale, Guddoomiyaha Maxkamadda Degmada Burco Maxamed Jaamac Cashuur oo gacanta ku haya Kiiskan, ayaa sheegay in Kiiskani aanu ahayn mid fudud, balse uu socdo, isla markaana ay codsi u gudbiyeen Wasaaradda Caddaaladda Somaliland, si Ilmaha looga qaado baadhitaanka Dhiigga dhalashada ee loo yaqaano DNA, kaas oo suurtogalinaya in la aqoonsado Ilmahan cidda dhashay. “Ka dib markii aanu arrintan baadhnay, waxaanu ogaanay in Gabadha yar lagu hayo Burco oo ay Gabadhaasi haysatao, sidaa darteed dacwad baanu ka furnay Maxkamadda Degmada. Gabadha Oromada ah iyo Ilmaha yare e ay wadato waanu haynaa oo waxa noo soo gudbiyay qolada Booliska ee Dembi-baadhista, baadhis ka dibna waxay noo sheegeen in aanay haynin dembi dhagar ah oo Xabsi ah ee ay Maxkamaddu arrintaa si madani ah ugu gar-qaaddo labada dhinac. Sidaa darteed, waxa Maxkamadda soo galay kiis culus oo ah Ilmo laysku haysto nasabaddiisa, taas oo u baahan in aad looga baaraan-dego oo la maro Shareecada Islaamka, Shuruucda dalka u yaala iyo wixii kale ee lagu kala saari karo.” Ayuu yidhi Guddoomiyaha Maxkamadda ee Degmada Burco.
Previous PostYooyootanka Culimadu ma noqon karaa bilowga ku-baratanka Jid ay hore u eedday Soomaaliya?Next PostGuddoomiyaha Xisbiga UCID oo ka hadlay sidii loogu soo dhaweeyey Magaalada Hargeysa	Blog